Sida loo maamulo daruurta darajada ee Automate iyo AWS
Ku dar daruurta daruuriga ah ee Automate iyo AWS
Kiimiko iyo AWS: Waa urur muhiim ah
Qalabka Automate-ka wuxuu u shaqeeyaa sidii kaalmada kormeerka ah
Kordhin ururkaaga AWS
Awoodda Hawl-galka Ganacsiga iyo kooxda-bannaan-kooxeedka
Aws OpsWorks for Chef Automate waa hawl wadajir ah oo u dhexeeya suuqa kala iibsiga ee Amazon Web Services iyo Software-ka, Inc. Taas oo muujinaysa, labada ururadu waxay diiradda saarayaan barwaaqadaada maamulkan. Waannu ku faraxsanahay inaanu ku faraxsanahay waxaanan si fiican u shaqeynay si aan kuu soo bandhigno sida ugu fiican ee marxaladdeenii marxaladdeena u keento miiska. Wuxuu si wadajir ah u shaqeyn doonaa oo aad ku tiirsanaan kartaa adigoo eegaya bixintaan oo sii wadaya sii kordhaya marka la eego naqshadeynta macmiilka. Laba ka mid ah hogaamiyeyaasha suuqa ayaa iska kaashaday sidii loo hubin lahaa inaad diyaar u tahay (sida aynu ka sheegnay bilowgii) "maareeyaha dariiqa."
At madaxa, waxaanu aragnaa qaab la macaamiisheena ugu weyn. Tan iyo markii aan bedelnay ururadooda iyaga oo ka caawinaya inay ka saaraan xeerka deg dega ah, ka amaan badan, iyo dhammaanba si ku meel gaadh ah, Shirkadda Automatate waxay u noqoneysaa maamulka asaasiga ah ee asaasiga ah. Sida hawlaha asaasiga ah ee maamulka, hubinta helitaanka iyo macluumaadka kalsoonida waxay u baahan tahay xoogaa khatar ah, jimicsi, iyo hanti. Macaamiisheena Fortune 500 waxay u baahan yihiin inay aasaasaan aasaaska udub-dhexaadka iyo maareynta arjiyada sida maamulka maamula.
AWS OpsWorks for Chef Automate waxay bixisaa heer la mid ah waxtarka, amniga, iyo tayada aan laheyn ee loo yaqaan "Automatate" oo ah inaad guud ahaan ka filan lahayd waxtarka AWS. Ka soo horjeeda labaad-waxay ku talineysaa tayada qalafsan ee qalabkaaga ama habboonaanta nidaamkaaga, waxaad siin kartaa AWS fursad ay ku kormeeraan Qalabka Automate adiga oo leh 24x7x365 baaxad iyo qiyaasta mushaharka-aad-aad-aad. U oggolow AWS inay wax ka qabato xoojintaada, dib-u-dhiska, iyo barnaamijyada dib u habeyn. Taasi waxay kuu ogolaataa adiga iyo kooxdaada in ay maalgashadaan tamarta yar ee kormeerka Shirkadda Automatate iyo waqti dheeraad ah oo xoogga saaraya ladagaalankaaga.
AWS OpsWaxyaabaha loo yaqaan 'Automatate' waa mashruuca AWS ee degaanka. Sida maamul kasta oo aad ka soo iibsato AWS, waxay yihiin ganacsadaha rikoodhka. AWS waxay bixisaa xoojiye, wax ka qabta maamulkaaga, waana ujeedadaada inaad la xiriirto qeybta weyn ee welwelkaaga. Shirkadda Software Software waa AWS-ku-naqshadeeye waxaanan sii wanaajinnaa isticmaalka alaabtayada. Iyadoo AWS OpsWorks loogu talagalay Qalabka Automat, waxaad ku sii fidinaysaa xiriirka hadda ee aad hadda la leedahay Adeegyada Amazon Web. Isticmaal kasta oo ka mid ah maamulahan waxay muujinaysaa sida faahfaahin ku saabsan kharashka AWS. Waxaad heleysaa dhamaan awoodda kalluunka, oo ay maalgaliso shirkadda alaabtu si waadax ah u ogtahay oo kalsooni. Qaybta ugu weyn ee isticmaalka Kareeriga waxaa lagu daraa hal toos ah, fudud in la isticmaalo, iyo sahlan in la arko aag. Sida qayb ka mid ah qeybaha kale ee asaasiga ah ee codsigaaga, waa qeyb ka mid ah qorshe adag oo laguu soo mariyey AWS.
Qalabkan cusubi waa waddo sahlan oo loogu talagalay macaamiisha AWS inay isku dayaan shayga ganacsiga ee xirfadlaha ah ee xirfad-yaqaannada: Shirkadda Automat. Iyada oo illaa 10 xarumaha bilaashka ah ee sanadlaha ah, waa hab guud oo ammaan ah si degdeg ah loo bilaabo oo loo fahmo sida Qalinka Automatate wuxuu ku siinayaa aqoonsi, qaab, iyo nidaam shaqo oo caadi ah markaad la macaamilayso dhammaan isbeddelka ku saabsan qorshahaaga codsiga. Iyada oo AWS OpsWorks loogu talagalay Qalinka Automate, waxaad sidoo kale diyaar u tahay inaad ka faa'iidaysato inta badan qalabka furan oo si joogta ah looga helo nidaamka nafleyda ee jimicsiga oo ay ku jiraan buugaagta cuntada lagu kariyo, jikada tijaabada, InSpec, Habitat, iyo (cad) Qaabeynta AWS iyo codsiyada. Waxaad fursad u heleysaa inaad saameyn ku yeelatid ugu caansan labada caalam oo aad ka bilowdo qashinka.
Weligeed ma aheyn wax degdeg ah ama yar oo dalbanaya in laga bilaabo xirfad-yaqaano Automate; isla markiiba hadda la heli karo raaxada AWS ee habka kale ee jiilalka kale.
12 Tricks oo loo Isticmaalayo Adeegyada Badbaadinta Bulshada
9 Koorsooyinka Tababarka ee ugu Fiican Mashiinnada Google Cloud Platform